विव्यसमा राजनीति - Pradesh Today
Homeमुख्य खबरविव्यसमा राजनीति
घोराही, ५ फागुन । पद्मोदय पब्लिक नमुना माविको विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनमा शनिबार निर्वाचन भयो । शनिबार भएको निर्वाचनमा अभिभावकभन्दा पनि दलीय उम्मेदवार हावी भए ।
सत्तारूढ दल नेकपा र प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संगठनात्मक रूपमा नै चुनावी अभियानमा लागे । नेकपामा उम्मेदवारले चुनाव जिते त्यो ३३ प्रतिशत अभिभावकको मदतानबाट ।
त्यसभन्दा केही दिनअघि सिद्धरत्न मावि नारायणपुरमा पनि दलीय उम्मेदवार बनाएर विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको निर्वाचन गराइएको थियो । त्यो निर्वाचनमा नेकाका उम्मेदवारहरू विजयी भए ।
अहिले पछिल्लो समय जिल्लामा विद्यालयहरूमा विव्यस गठन हुने गरेका छन् । प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति हुने गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा आम निर्वाचनको झल्को दिने गरिएको छ ।
पद्मोदयमा ३ हजार ७ सय ९१ मतदाताहरू रहेका विद्यालयमा १ हजार २ सय ३८ मात्र मत खसेको थियो । यो मतदाताको तथ्यांकलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि अभिभावकहरू विद्यालयमा राजनीति चाहन्नन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी चुन्नको लागि विद्यालयका अभिभावकभन्दा राजनीतिक दलहरू खटिएका छन् । व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीहरूको प्रचारप्रसारदेखि नेतृत्व नै राजनीतिक दलहरूले चुनेका थिए ।
यो तथ्यांकले पनि विद्यालयमा अभिभावकहरू राजनीतिक चाहदैनन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ मा रहेको श्री सरस्वतीमा मावि काठेकोलमा पनि राजनीतिक बाँडफाँड गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति सर्बसम्मत चुनिए । जुन विद्यालयमा कुनै सरोकार नै थिएनन् ।
मात्र राजनीति बाँडफाँडको आधारमा उनीहरू चुनिएका थिए । त्यो विद्यालयमा अभिभावक नै थिए न त त्यो विद्यालयको समुदायको नै । नेपाली काँग्रेस र नेकपाका राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा मिलाएर सर्वसम्मत रूपमा आफै नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चुनिए ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. २ स्थित गंगा मावि रामपुरको विद्यालयमा पनि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको चुन्नको लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यही फागुन ६ गते हुने निर्वाचन नेपाली काँग्र्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक समूह र नेकपा समूहको समर्थनमा निर्वाचन हुँदैछ ।
त्यो विद्यालयमा सहरभन्दा केही टाढाको विद्यालय हो । तर त्यो विद्यालयमा पनि राजनीतिक खिचातानीबाट अछुतो रहन सकेन् । दुबै समूहका राजनीतिक दलहरूले जिताउनको लागि निर्वाचन चिन्हसहित प्रचारप्रसार तिव्र पारेका छन् ।
यी त उदाहरण मात्रै हो । जो राजनीतिक खिचातानीमा देखिएका सामुदायिक विद्यालयहरू । राजनीतिक हाबीबाट मुक्त नहुँदासम्म सामुदायिक विद्यालयको विकास हुँदैन र शैक्षिक सुधार पनि हुँदैनभने तिनै राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै आईरहेका छन् । भाषणबाहेकको समयमा बढी केन्द्रित सामुदायिक विद्यालयको राजनीति गर्नमा नै व्यस्त हुन्छन् ।
आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थीहरू नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । कतिपय अभिभावकलाई त राजनीति नै थाहा छैन, अभिभावक भेला,
विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै थाहा छैन् । त्यस्ता विद्यालय जो सामुदायिक विद्यालयमा गएर राजनीति गर्न गराउन भ्याई नभ्याई छ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई । ‘कतिपय विद्यालयहरूमा त वडा अध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भएका छन्,
कोही समितिको अध्यक्ष बन्नको लागि पार्टीकै कार्यकर्ताहरू तछाडमछाड गरिरहेका छन्’ निरास हुँदै एक अभिभावकले भने ‘यो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको के आशा राख्नु ?’ राजनीतिक खिचातानीकै कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न नसकेको उनले बताए ।